ब्यूटी सैलुनमा ती पेशेवर कपाल हटाउने उपकरणहरूको आविष्कार गर्दै - टेक्निकल इन्फर्मेशन-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
ब्यूटी सैलुनमा ती पेशेवर कपाल हटाउने उपकरणहरूको ईन्भेन्टरी गर्दै
समय: 2021-04-09 हिट्स: 2
चूंकि परम्परागत कपाल हटाउने विधिहरूले शरीरको कपाललाई पूर्ण रूपमा हटाउन सक्दैन, र हाम्रो छालामा केही क्षति पनि छ। केश हटाउने उपकरणहरू ब्यूटी सैलुनमा प्रयोग गरिन्छ? मलाई ती तपाईंको लागि सूचीबद्ध गरौं।
१, मल्टिफंक्शनल ओपीटी: यो उपकरण सौंदर्य सैलुनमा अपरेटरहरूलाई परिचित छ, र बजारमा बिक्री पनि राम्रो छ। सौन्दर्य सैलुनहरूको लागि बहु-फंक्शनल ठूलो-स्तर कपाल हटाउने उपकरणले बरफ कूलि fun फन्सिओन अन्तर्गत कपाल हटाउन सक्छ। कपाल हटाउने को चरम मौसममा, यसले ग्राहकहरुलाई कपाल हटाउने राम्रो अनुभव दिन सक्छ। उन्नत फ्ल्याट-टॉप स्क्वायर वेभ टेक्नोलोजी प्रयोग गरी उपकरण बनाउन सन्तुलित र स्थिर उर्जा कपाल हटाउने क्रममा उत्सर्जन गर्न। पूर्ण प्रकार्यहरूले यसलाई कपाल हटाउने उद्योगमा उच्च बजार साझेदारी गर्दछ।
२, 2०808 सेमीकन्डक्टर: सेमीकन्डक्टर लेजर टेक्नोलोजी एक चिकित्सा स्तरको पेशेवर कपाल हटाउने टेक्नोलोजी हो, संवेदनशील छालाका लागि कपाल हटाउने उपकरण। यसले ओठको कपाल, बगल कपाल, र अन्य संवेदनशील भागको कपाल हटाउन सक्छ। यसले एक उच्च उर्जा डिपिलेटरी लेजर प्रयोग गर्दछ, hair ०% भन्दा बढी कपालको फोलिकल्सले पर्याप्त तातो लिन सक्छ र नष्ट हुन सक्छ, र कपाल हटाउने प्रभाव राम्रो हुन्छ। यो कपाल हटाउने उपकरणमा एक पेशेवर प्रकार हो।
,, E- प्रकाश कपाल हटाउने उपकरण: सौन्दर्य सैलुनमा कपाल हटाउने उपकरणका बीचमा, मूल्य अपेक्षाकृत सस्तो छ, र त्यहाँ धेरै वस्तुहरू छन् जुन पूरा गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि कपाल हटाउने र freckles उपलब्ध छन्। तर अब कपाल हटाउने परियोजनाको कुनै फाइदा छैन। कपाल हटाउने क्रममा स्पष्ट पीडा हुनेछ, जुन धेरै ग्राहकहरूको लागि अस्वीकार्य छ, र यसले अपरेटरलाई निश्चित सीप चाहिन्छ, र कपाल हटाउने प्रभाव hair०3 कपाल हटाउने उपकरण जत्तिकै राम्रो हुँदैन। दुबै ब्युटीशियन र ग्राहक दुबैलाई कपाल हटाउन गाह्रो छ, यति धेरै ब्यूटी सैलुनले यो उपकरणको प्रयोग गरेको छैन।
अब अधिक र अधिक व्यक्ति पोर्टेबल घर कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्न रुचाउँछन्, यदि तपाईंलाई अधिक विवरण जानकारी चाहिएको छ भने, कृपया मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
अघिल्लो: लेजर कपाल हटाउन कहिले सम्म रहन सक्छ?
अर्को: केशाहरूको खुट्टाको खुट्टा हुनु कस्तो प्रकारको अनुभव हो